यस्तो सहमति गरेर घर फर्किए जाेडी, भेनाले भारत पुर्याएको खुलासा, रोकिएन श्रीमानको आँखामा आँशु (भिडियो सहित) – Complete Nepali News Portal
ScotNepal August 1, 2021
झापा । झापामा एक युवकले १३ बर्ष बिदेशमा दुख गरे । उनका २ जना छोरीहरु पनि छ्न तर घरमा श्रीमती अर्कै संग सम्पती लिएर फरार भएपछि श्रीमान बिगत १८ महिना बाट श्रीमतीलाई खोजी गरिरहेका छन ।
श्रीमती भेना भनिने एक युवक सङ फरार भएको उन्ले बताए । भेना सङ श्रीमतीको पहिला बाटनै नजिक सम्बन्ध थियो भन्दै उनले दुख मानेका छन । अहिले ९ बर्ष र १२ बर्षका छोरीको बिजोक भएको उनले बताए । श्रीमती लाने युवाका २ जना श्रीमती पहिलेनै भएको र अहिले आफ्नो श्रीमती लगेपछि तेस्रो बिहे गरेको पिडितले बताए । २ जना श्रीमान र श्रीमतीको भेट भएपछि नसोचेको भएको छ ।
फरार श्रीमती र नाठोलाई रङ्गेहात भेटेपछि पर्यो हानाहान, श्रीमतीलाई छुट्याउनै मुस्किल फरार साली भेना यस्तो अबस्थामा भेटिए,रिसाएका श्रीमानले दिए झापड, रङ्गेहात भेटेपछि चल्यो रुवाबासी भगाउने भेनाले फोनमा बोल्न थालेपछि मोबाइल खोसाखोस परेको थियो । अन्त्यमा यस्तो सहमति गरेर घर फर्किए जाेडी, भेनाले भारत पुर्याएको खुलासा, रोकिएन श्रीमानको आँखामा आँशु तलको भिडियोमा हेर्नुहोला ।
पोखरामा के भयो यस्तो ! महीला
गायक राजु अर्यालको आवाजमा” फुलबुट्टे चोली
एनआरएन यूकेको च्यारिटी डिनरमा २८ हजार
अन्तिम दिन भद्रकालीमा धर्ती माताले देखाइन
पोखरामा के भयो यस्तो ! महीला र कुकुर एउटै डोरीमा...
चर्चित मोडल अन्जली अधिकारीले खेलेको नया गीत टिकटकमा भाइरल
सिता भण्डारी ह,त्या प्रकरणमा खुल्यो यस्तो रहस्य,ढोकामा पनि कोही झु,न्डिएर...